Issued on: 20/08/2019 - 13:44 Modified: 20/08/2019 - 13:52
Police officers patrol near Tredgold Magistrates courts on August 19, 2019, in Bulawayo, Zimbabwe Zinyange Auntony / AFP
Up to five million Zimbabweans, about a third of the country’s 16.5 million people, are now in need of food aid, according to the latest UN statistics.
The publication defends remarks by Foreign affairs and international trade minister Sibusiso Moyo denouncing the MDC Alliance’s “deliberate scheme, timed to coincide with the start of Zimbabwe’s mandate as chair of the SADC troika, “just to paint the country in bad light”.
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa and his wife Auxillia look on during his inauguration ceremony in Harare, Zimbabwe, August 26, 2018. REUTERS/Philimon Bulawayo REUTERS/Philimon Bulawayo
While Zimbabwe’s high court struggled to find legal arguments to uphold the ban peaceful protests enshrined in Zimbabwe’s constitution, the judiciary has come under criticism for the controversial jailing of a traditional ruler.
The very prominent traditional ruler from Matabeleland, was not harshly punished for the crops worth a mere 27 euros, but because he’s been quite vocal against the government, unlike other Zimbabwe chiefs who are known to be pro-government, argues the Standard.
According to the Standard, the actions by the security forces discredit Mnangagwa’s claims that he is different from Mugabe, who had a reputation of being a brutal dictator.
PARIS LIVE 19 08 2019 Focus on Africa, Zimbabwe/ Kholwani Nyathi, Editor of The Standard comments about ban on street protests as recession worsens